Muammar al-Gaddafi | Freedom News Group
2 Comments	လစ်ဗျား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး အင်္ဂလန် တွင် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံ
ယနေ့ ထပ်မံ ပစ်လွှတ် တိုက် ခိုက် ခဲ့သည့် တိုမာဟောခ် ဒုံးကျဉ် များ ထရီပိုလီ မြို့တွင် ကျရောက် ပေါက်ကွဲ စဉ် Updated ကဒါဖီ ၏ အစိုး ရ အဖွဲ့ တွင် ထိပ်တန်း ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် လစ်ဗျား နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး
မူဆာ ကူဆာ သည် လစ်ဗျား အစိုးရ အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ကာ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ နိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံရေး
ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံသည် ဟု ဂါးဒီယန်း သတင်းစာ ၏ အင်တာနက် စာမျက် နှာတွင် ဖော်ပြထား
ယမန်နေ့ က မူဆာကူဆာ သည် ယမန်နေ့ က အိမ် နီး ချင်းတူ နီရှား နိုင်ငံ မှ နေ၍ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ
သို့ ယနေ့ မနက် တွင် ရောက် ရှိလာက နိုင်ငံ ရေး ခိုလှုံ ခွင့်တောင်း ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Read more
1 Comment	လစ်ဗျား ပြည်သူများ လွတ်မြောက် ရေးကြိုးပမ်းမှု အတွက် အိုဘားမား မိန့် ခွန်းပြော
‘Our Own Future Is Safer And Brighter If More Of Mankind Can Live With The Bright Light Of Freedom’
ယနေ့ ဝါရှင် တန် ရှိ ဖို့ မက်နား စစ်စခန်း တွင် လစ်ဗျား နိုင်ငံ ခေါင်း ဆောင် ဗိုလ်မှုးကြီး ကဒါဖီ အား အမေရိကန်
က စစ်ရေး အရ တိုက် ခိုက်မှု နှင့် ပတ်သက် ၍ တိုင်းပြည်သို့ မိန့် ခွန့် ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထိုမိန့် ခွန်း တွင် အိုဘားမား က
အမေရိကန် အနေဖြင့် ကဒါဖီ ၏ မိမိ ပြည်သူများ အပေါ် ရက်ရက် စက်စက် သတ်ဖြတ်မှု အပေါ် အရေး မယူ ခဲ့လျှင်
အမေရိကန် အနေ ဖြင့် ကြီးမား သော အဖိုးအစား ပေးဆပ်မှု နှင့် ကြုံရမည် ဟု ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ Read more
21 Comments	ရောင်နီပျို့ သို့ ခရီးရှည် စစ်ဆင်ရေး ဒုတိယနေ့ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်
မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ များ က တိုမာဟောခ် ဒုံးကျဉ်များ ဖြင့် ကဒါဖီ၏ စစ်စခန်းများကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသည့် လစ်ဗျား တပ်များ အက်ဒါဘီ ယာမြို့ ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်
ကဒါဖီ ၏ သစ္စာခံတပ်များ က အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ ကို ဖမ်းဆီးပြီး လူသား ဒိုင်း လုပ်ခိုင်း
ကဒါဖီ ပျောက်ဆုံးနေပြီ ဟု မြို့ တော် ထရီပိုလီ တွင် သတင်းထွက်ပေါ်
Libyan Pro-Democracy Armed forces regroup and Head to Tripoli ပြင်သစ် က ယခု အချိန်ထိ အရပ်သား သေဆုံးမှု မရှိသေး ဟု ဆို
ရစ်လာ နုဖ် ရှိ ကဒါဖီ ၏ ကြံ့ဖွတ် ခေါင်းဆောင် ဒုံးကျဉ် မှန်ပြီးသေ
ကဒါဖီ က ခလေးများ ကို စကောလားရှစ် မက်လုံးပေး ၍ ၎င်း၏အိမ် ရှေ့ တွင်ထိုင်ခိုင်း
လစ်ဗျား နိုင်ငံ တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ဆန္ဒပြ ကတည်းက ယခု အထိ ၈၀၀၀ ကျော်သေဆုံး
ကဒါဖီ ၏ အပစ် အခတ် ရပ် စဲ ရေး ကို အမေရိကန် က ပယ်ချပြီး ဆက်လက်တိုက်မည် ဟု ပြော
ဘန်ဂါဇီ မြို့မှ ကဒါဖီ ၏ တပ်များ ကို မဟာမိတ် တိုက်လေယာဉ် များ တိုက်ခိုက် ချေမှုန်း နိုင်ခဲ့
ထရီပိုလီ ရှိ လစ်ဗျား ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ကို ဗြိတိသျှ သင်္ဘောများက တိုမာဟောခ်
ဒုံးကျဉ်ဖြင့် ဆက်လက် တိုက်ခိုက်
B 52 Stealth ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် ဘန်ဂါဇီ မြို့ မှ အပြစ်မဲ့အရပ်သား များ ကို တိုက်ခိုက် နေသည့် ကဒါဖီ ၏ တင့်ကားများ မီးလောင်ပျက်စီးနေစဉ် Photo: REUTERS
FNG ၊ ၊ယမန်နေ့ က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့ များ ၏ ဒုံးလက်နက် ပစ်လွှတ်မှု နှင့်
လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေး များ မှာ ထိရောက်မှု ရှိကြောင်း ရေတပ်ဦးစီးချုပ် ၀ီလျှံ ဂေါ်တနီ က CNN
သတင်းဌာနကို ပြောကြား ခဲ့သည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အတွင်း က မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်းမှ နေ၍ အယ်(လ)ဂျာဇီးယား သတင်းဌာန အတွက် သတင်းများ ပေး ပို့ ခဲ့သူ တိုနီဘာတလေ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Mar 15
17 Comments	တော်လှန်ရေး လုပ်မယ် ဆိုရင် အမေရိကန် ကို ရာဇ၀င် ထဲ မှာ ထားရစ်ခဲ့
Why U.S. Idle on Libya freedom?
တင်ကျော်ကျော်စိုး၊ ၊အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ကောင်းမှု ကြောင့် လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ရဲ့ဝပ်ကျင်းထိရောက် လာတဲ့ လစ်ဗျား အတိုက်အခံ နဲ့ စစ်သား သူပုန်တွေ ဟာ
အခုတော့ သူတို့ ရဲ့ခံကတုပ်ကျင်း ဘန်ဂါဇီ ကိုတောင် သိမ်းယူ တော့ ပါမယ်။ ဘန်ဂါဇီ မတိုင်
ခင် ဇူဝါရာ မြို့ လည်း ကဒါဖီရဲ့ သစ္စာခံ တပ် တွေ ထဲ ကျသွား ပါပြီ။ Read more
7 Comments	ကဒါဖီ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိစွာ ထွက်ခွာခွင့် အဆိုကို သဘောထားတင်းမာ သည့် လက်နက်စွဲကိုင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတို့ ပယ်ချ
Rebels Reject Gaddafi Resignation Meeting Offer
LOOKING FOR AN EXIT? ‎There is no exit for dictator . LATEST UPDATES Home Updates every 10 minute(s) နေတိုး တိုက်ခိုက်ရေး နှင့် အမြောက်တင် C130 လေယာဉ်များ လစ်ဗျား ကောင်းကင်ယံသို့ ဝင်ရောက်
ကမ္ဘာကျော် အာဏာရှင် တစ်ယောက် ၏ အဆုံးသတ် မှု ကို Freedom News Group မှတိုက်ရိုက်တင်
ကိုင်ရို၊ အီဂျစ်။ ။လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ က ပြည်သူ့ ကွန်ဂရက် ခေါ်ဆိုပြီး သူ့ ကို
သိက္ခာရှိ သော နှုတ်ထွက် ခွင့် ပေးပါရန် တောင်းဆိုမှု ကို နိုင်ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင်း နှုန်း မြို့ တော်
၏ ထက်ဝန်ခန့် ကို ထိန်းချုပ် ထားသည့် လစ်ဗျား သူပုန် များ က ယနေ့ ငြင်းဆိုလိုက်သည်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Feb 23
ကဒါဖီ ၏ ညာလက်ရုံး ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဆန္ဒပြသူ များ နှင့် ပူးပေါင်း
A hurricane of change is blowing through the Arab world
စီအိုအေ ကြွက်တွေ ကို တစ်အိမ် တက် တစ်အိမ် ဆင်း ဖမ်းမည် ဟု ဒေါသူပုန် ထကာပြောကြားနေသည့် လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ Latest: ဆန္ဒပြ သူတွေ နဲ့ ပူးပေါင်း ခဲ့တဲ့ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ကို အမည်မသိလက်နက် ကိုင် အုပ်
စု က ပြန်ပေး ဆွဲထားပါတယ်။
လစ်ဗျား နိုင်ငံ ထရီပို လီ မြို့ ရဲ့နောက်ဆုံး အခြေအနေ တွေ ကတော့ ကဒါဖီ ရဲ့လူယုံ
တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး Abdul Fattah Younis al Abidi က လက်ရှိ အစိုးရ
အဖွဲ့ ထဲ ကနေ နှုတ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်း သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လစ်ဗျား
ခေါင်းဆောင် အဏာရှင် ကဒါဖီ ကတော့ သူ့ ရဲ့ ကြေးစား တပ် တွေ
ကို လစ်ဗျား နိုင်ငံ တ၀ှမ်း က ရေနံတွင်း တွေ ကို ဖောက် ခွဲ ဖို့ စေလွှတ် နေပါပြီ။ Read more
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,729,093 hits